Football Khabar » अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा रोमासको नयाँ कीर्तिमान
अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा रोमासको नयाँ कीर्तिमान
स्पेनको राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान तथा डिफेन्डर सर्जियो रामोसका नाममा नयाँ कीर्तिमान बनेको छ । ३४ वर्षका रामोस अब सबैभन्दा धेरै खेल खेल्ने युरोपियन खेलाडी बनेका छन् । गत राति युइएफए नेसन्स लिग फुटबलमा स्पेनले स्वीट्जरल्यान्डसँग १–१ को बराबरी खेलेको खेल रामोसका लागि १७७औं अन्तर्राष्ट्रिय खेल थियो ।
स्वीट्जरल्यान्डको घरमा भएको सो खेल रोमासका लागि व्यक्तिगत रूपमा खराब रहेको थियो । उनले एकै खेलमा दुई पेनाल्टी मिस गर्दा स्पेन जितबाट चुकेको थियो । रामोसले स्पेन र क्लब रियल मड्रिडका लागि २५ पेनाल्टीमा लगातार गोल गरे पनि स्पेनका लागि हानेको २६औं र २७औं पेनाल्टी भने लगातार मिस गरेका हुन् ।
रियल मड्रिडबाट खेल्ने रामोस अब युरोपबाट सर्वाधिक क्यापको रेकर्ड होल्डर खेलाडी बनेका छन् । उनले इटालियन गोलकिपर जियानलुइजी बुफोनको १७६ खेलको रेकर्डलाई पछि पार्दै आफ्ना नाममा १७७ खेलको नयाँ रेकर्ड बनाएका हुन् । उनले अघिल्लो खेलबाट बुफोनसँगको रेकर्ड बराबरी गरेका थिए ।
सन् २००५ मा स्पेनको राष्ट्रिय टोलीमा डेब्यु गरेका रामोसले १६ वर्षको अवधिमा १७७ खेल खेलेका हुन् । सोक्रममा उनले स्पेनका लागि कूल २३ गोल गरेका छन् । रामोसले स्पेनबाट सन् २०१० मा फिफा विश्वकप जित्दा सन् २००८ र २०१२ मा लगातार दुई संस्करण लगातार युरो कप जितेका थिए ।
सर्वाधिक क्याप पूरा गर्ने टप–३ युरोपियन खेलाडी
१. सर्जियो रामोस (स्पेन) – १७७ खेल
२. जियानलुइजी बुफोन (इटाली) – १७६ खेल
३. क्रिस्टियानो रोनाल्डो (पोर्चुगल) – १६९ खेल
प्रकाशित मिति ३० कार्तिक २०७७, आईतवार १८:३०